ဝက်ဆိုက်များ စုစည်းမှု့: အောင်ခိုင်မီုး
Moborobo All In One Android PC Suit 2012
ANDROID PHONE တွေအားလုံးကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရမယ့် Software လေးပါ။
Showing posts with label Android Service. Show all posts
Android Phone Drivers များ
wai phyo | 1:41 PM | Android Service
ဘော်ဒါတို. Android ဖုန်းတွေ နဲ. ကလိဖို. ကွန်ပြူတာနဲ ချိတ်ဖို. စတဲ. အချိန်တွေမှာ ဖုန်းရဲ. Driver တွေလို ပါတယ်..မိမိကွန်ပြူတာက Driver မသိရင် ဘာမှ မလုပ်ပေးပါဘူး ..။ ကဲ ဒါကြောင်. Drivers လေးတွေ Share ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ZTE...
Android ဖုန်း တော်တော်များများကို Root လုပ်မယ်
wai phyo | 10:44 AM | Android Service , PC Software
Unlockroot tool ဆိုတဲ. ဆော.ဖဲဝ်လေးနဲ. မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.. ပထမဆုံး ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ..ပြီးရင် မိမိ Root ချင်သော ဖုန်းရဲ. သက်ဆိုင်ရာ Driver များကို ကွန်ပြူတာတွင် install လုပ်ပါ...။ လုပ်ပြီးရင်...
Huawei U8818 ICS 4.0.3 ကို Root ကြမယ်
wai phyo | 5:06 PM | Android Service
ကဲ ဟိုတစ်နေ.က Version 2.3.6 ကနေ 4.0.3 တင်ထားတဲ.လိုက်တဲ. U8818 သမားတွေ အတွက် Root လုပ်နည်းလေးပါ..။ http://www.mediafire.com/?m28766pxgyxdx1d ဒီလင်.ကနေ Unlock Boot Loader ကိုဒေါင်းပါ။ အရင်ဆုံး...
Huawei U8818 ကို ICS 4.0.3 ထိ version မြှင်.ကြမယ်
wai phyo | 12:03 PM | Android Service
အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ. Firmware ဖိုင်ကို အောက်ပါလင်.မှ ရယူလိုက်ပါ... U8818 ICS firmware ဒေါင်းပြီးသွားရင် ၁. ဒေါင်းထားတဲ. Zip ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ ၂ .dload ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။ ထိုfolder...
Android Phone Pattern lock ဖြည်နည်း
wai phyo | 12:07 PM | Android Service
Android Palace မှာ Ko Soerawin ဆိုတဲ. ဘော်ဒါတစ်ယောက်က Android Phone တွေမှာ Pattern Lock ဖြည်တဲ.နည်း မေးထားလို. ဖြေလိုက်ပါတယ်..။ Pattern Lock ဖြည်နည်း (2) နည်းတော. ကျွန်တော်တွေ.ထားပါတယ်။နောက်ထပ်...
Huawei C8500 ကို ROOT လုပ်ရအောင်......
အောင်ခိုင် မိုး | 3:21 PM | Android Service
ကျွန်တော့်ကို C-Box မှာ အကိုတစ်ယောက် မေးလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ C8500 ကို ROOT လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာမှတော့ သိပ်မခက်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး z4root ကို Download ဆွဲလိုက်ပ...
Huawei U8861,U8818,U8812 ကို ROOT လုပ်မယ်။
အောင်ခိုင် မိုး | 2:00 PM | Android Service
ကျွန်တော့်ကို မေးလာတဲ့အကိုနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက် ရှိလို့ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ROOT လုပ်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးတော့ မိမိကွန်ပျူတာမှာ Driver ရှိရပါမယ်။ မရှိတဲ့သူများ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ။ Motorola_End_User_Driver_Installation_5.4.0_32bit Motorola_End_User_Driver_Installation_5.4.0_64bit &nbsp...
C8812 တွင် 3G Internet Setting ထည့်နည်း
အောင်ခိုင် မိုး | 11:16 AM | Android Service
ကျွန်တော့်ကို C-Box မှာ အကိုတစ်ယောက် မေးထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းစ၀ယ်ပြီဆိုရင် မိမိဖုန်းမှာ အင်တာနက်လိုင်း လျှောက်ထားရင် ဆိုင်က 3G Internet Setting ကို တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားတာ များပါတယ်။ ခုကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ထည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းလျှောက်ထားပြီး သုံးလို့မရတာက မိမိဖုန်းမှာ APN မှန်အောင် မထည့်ထားလို့ပါ။ တော်တော်များများကလဲ အဆင်မပြေကြပါဘူး ဒါကြောင့်အောက်မှာ APN ထည့်နည်း ရေးပေးလိုက်ပါတယ...
Huawei C8812 ROOT လုပ်နည်း၊ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း။
အောင်ခိုင် မိုး | 12:04 PM | Android Service
ကျွန်တော် ရှေ့မှာလည်း Huawei C8812 ကို ROOT လုပ်နည်း တင်ပေးပြီးသွားပါပြီ။ C-Box မှာ အစ်ကို တစ်ယောက်က အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ သီးသန့်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း CDMA တွေအတွက် အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ C8812 ကို လူတော်တော်များများ ကိုင်လာကြပါတယ်။ Android Version 4.0.3 ( ICS ) မို့လို့ တော်တော်များများကလည်း စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ခုကျွန်တော် ROOT လုပ်နည်းလေး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။...
Huawei C8800 ကို Version 2.x.x ကနေ 2.3.6 ကို မြှင့်ကြရအောင်...
အောင်ခိုင် မိုး | 3:50 PM | Android Service
ကျွန်တော် C8800 ကိုင်တဲ့သူတွေအတွက် မိမိဖုန်းရဲ့ Android Version ကို မြှင့်ဖို့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း C8800 ကိုင်တာပါ။ အားလုံးကို ကျွန်တော် သိတာလေး ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ တော်တော်လေးလည်း လန်းသွားလို့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ လန်းလွန်းလို့ မျက်လုံးတောင်မနည်းဖွင့်ရတယ်။ : D မှတ်ချက် ။ ။ အောက်က အဆင့်များကိုသေသေချာချာဖတ်ပြီးလုပ်သွားပါ။ ကျော်လည်းမဖတ်ပါနှင့်။...
Samsung Galaxy Gio S5560 Rootလုပ်နည်း
ဇာရည်ထူး | 2:49 PM | Android Service
Samsung Galaxy Gio S5560 ကိုင်ဆောင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် Root လုပ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်....... 1. ပထမဆုံး ဒီနေရာမှာ zipfile လေးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ...2.ပြီးလျှင်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာကိုချိတ်ဆက်ရပါမယ်................... 3.ဖုန်းရဲ့ SD Card ထဲမှ Data(or)folder များကို Format ရိုက်ပါ(မိမိဖုန်း၏ SD Card Storage နှင့်သာသက်ဆိုင်ပါသည်၊ 2GB သုံးလျှင် Format ရိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ၊ 4GB သုံးသူများအတွက်တော့ကိစ္စမရှိပါ၊) ...
Huawei C8812+U8818 ကို ROOT လုပ်မယ်။ Myanmar Font ထည့်မယ်။
အောင်ခိုင် မိုး | 1:37 PM | Android Service
ဇူလိုင်မိုး : HUAWEI U8818 အတွက် root လုပ်နည်းလေးကိုတင်ပေးပါအုန်းလို့တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် U8818 နဲ့ C8812 ROOT လုပ်နည်း အတူတူပဲမလို့ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အောက်မှာ Download ချသွားလိုက်ပါ။ Super Click.rar Font Changer.apk MyanDroid Soft Keyboard.apk Root လုပ်နည်း အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ မိမိစက်မှာ မိမိဖုန်း Driver တင်ထားပါ။ ပြီးလျှင် USB Debugging ကို Enable လုပ်ဖို့အတွက် ဖုန်းရဲ့ Setting > Development > USB...
ပညာဓိကာလင်္ကာရ(Pyinnyardhikalinkara) :: Kindle fire -တွေ ကော မြန်မာဖောင့်သွင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိပါသလား.. ရှိတယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး တင်ပေးစေချင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်လည်း ခုနောက်ပိုင်း နည်းနည်းအလုပ်လေးတွေ ရှိလာလို့ Blog ဘက်တောင် အာရုံသိပ် မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ခု Mail ထဲမှာ မေးလာတဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိလို့ အားလုံး အဆင်ပြေအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စလုပ်လိုက်ကြရအောင်.... : P Kindle Fire 6.3.1 ကို ROOT လုပ်နည်း Kindle Fire 6.3.1...
Samsung Galaxy Mini GT-S5570 Rootပြုလုပ်နည်း
ဇာရည်ထူး | 1:55 PM | Android Service
ဒီတခါတော့Samsung Galaxy Mini GT-S5570 Andriod Version 2.3.4ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် Root တင်နည်းလေးကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်------ 1. အရင်ဆုံး ဒီနေရာမှာ zip file လေးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ။ 2.ပြီးလျှင်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာကိုချိတ်ဆက်ရပါမယ်။ 3.ဖုန်းရဲ့ SD Card ထဲမှ Data(or)Floder များကို Storage လုပ်ပြီးလျှင် Format ရိုက်ပါ။(မိမိဖုန်း၏ SD Card Storage နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။2GB သုံးလျှင် Format ရိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။4GB သမားအတွက်ကတော့ ပြသာနာသိပ်မရှိပါ။ 4.ထို့နောက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသော...
Samsung Galaxy Y S-5360 Root တင်နည်း
ဇာရည်ထူး | 7:18 PM | Android Service
Samsung Galaxy Y S-5360 Root တင်နည်း Samsung Galaxy Y S-5360 ကိုင်ဆောင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ Root လုပ်နည်းလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်-- 1.ပထမဆုံး ဒီနေရာ မှာ Zip file လေးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ။ 2.ပြီးလျှင်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာကိုချိတ်ဆက်ရပါမယ်။ 3.ဖုန်းရဲ့SD Card ထဲမှ data(or)folder များကို Storage လုပ်ပြီးလျှင် format ရိုက်ပါ။ ( မိမိဖုန်း၏ SD Card Storage နှင့်ဆိုင်ပါသည်။2GB သုံးလျှင် Format ရိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။...
Samsung Galaxy Ace S5830 ကို ROOT လုပ်နည်း
အောင်ခိုင် မိုး | 12:16 PM | Android Service
ကျွန်တော် နောက်ပိုင်း ဖုန်းတွေကို Root လုပ်နည်းနဲ့ Version မြှင့်နည်းလေးတွေ အားတဲ့အချိန်တိုင်း ရေးပေးသွားပါမယ်။ ခုတော့ ကျွန်တော် Samsung Galaxy Ace ကိုင်တဲ့သူတွေအတွက် Root လုပ်နည်းလေး ရေးပေးသွားပါမယ်။ ခုတော့ကျွန်တော် Root လုပ်နည်းနဲ့ ဘာကြောင့် Root လုပ်ရတာလဲဆိုတာကို ရေးပေးသွားပါမယ်။ Samsung Galaxy Ace S-5830 ကို Root လုပ်နည်း အရင်ဆုံး အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Zip File လေးကို Download ဆွဲလိုက်ပါ။ Download Here ပြီးရင် မိမိဖုန်းရဲ့...
Posted by naihan at 01:34